Iindaba ze-Android: ukukhutshwa, iindaba, amarhe kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 34)
I-Samsung Galaxy S6 Edge, yazisa i-smartphone yokuqala ngescreen esigobileyo
Sibuya kumboniso we-Samsung Galaxy S6 Edge, i-smartphone yokuqala enescreen egobileyo, kwaye ezi ziyimpawu zethu.
I-Samsung Galaxy S6, ivelise iflegi entsha yomenzi
Ukuboniswa kwe-Samsung Galaxy S6 ekugqibeleni kufike, kwaye iimvakalelo azinakuba ngcono. Ngaba i-Samsung iya kuba yimpumelelo enkulu kwi-MWC 2015?
I-MWC 2015, ezi ziindaba esizilindeleyo kweyona mboniso inkulu yokunxibelelana ngomnxeba
I-MWC 2015 ikufuphi kwikona ngoko sikulethela isishwankathelo sazo zonke iindaba esiza kuzibona kulo msitho ubalulekileyo wefoni
Ukuthenga iMotorola Moto E 2015 ngoku kunokwenzeka ngeAmazon Spain
Sele sinesiphelo esitsha seMotorola esithengiswayo kwi-Intanethi, ke ukuba ufuna ukuthenga iMoto E 2015 apha sixelela ukuba kuphi kwaye njani
Iidinosaurs ezineentloni kunye neeponi ezinemibala phakathi kweempawu ezifihlakeleyo zeGoogle Hangouts
Namhlanje sikuzisa inqaku onokuthi wothuse abahlobo bakho ngenxa yeendlela ezahlukeneyo ezifihliweyo ezenzelwe iGoogle kwiiHangouts.
[Ividiyo] iTelegram eyongezelelweyo inokuba yeyona nto iphambili ekungekhoyo iTelegram. Sikubonisa indlela yokuyisebenzisa
Gqibezela isifundo sevidiyo apho sikufundisa khona ukuba ungayisebenzisa njani iTelegram Plus ye-Android.
[Ividiyo] Uhlalutyo lweMoto E 2015, sivavanye ngokucokisekileyo iMotorola encinci
Apha ndikushiya olu hlalutyo lupheleleyo lwe-Moto E 2015, i-terminal ebizelwe ukulawula icandelo lesiphelo esisezantsi se-Android, esinokuthi sibe phakathi kwinqanaba eliphakathi kunye neenkcukacha zobuchwephesha ze-infarction yesiphelo se-euro ezili-129 kuphela.
Vexia Zippers Ifowuni 5 uphononongo: uphononongo lwevidiyo, iifoto kunye nevidiyo
Uhlalutyo lweZippers Ifowuni 5 entsha evela kwiVexia, ifowuni enomdla enesikrini esine-intshi ezintlanu kunye ne-octa-core chip
Imidlalo yokuLungisa ye-Android: Namhlanje, iPixelman yasimahla
I-Pixelman Simahla yenye yeemidlalo zokulutha ze-Android eziphumelelayo ngokulula kokudlala ngexesha elifanayo zibonisa ezinye zeemifanekiso ze-retro.
Ukudlala uMculo kuGoogle kukhulisa ukugcinwa kuye kwiingoma zasimahla ezingama-50.000 XNUMX
I-Google Play Umculo sele ivumela ukulayishwa kweengoma ezingama-50.000 20.000, ukwandisa inani elivela kwiingoma ezingama-XNUMX
Iprosesa yeMT6795 isondele kwiQualcomm kunye neSpapdragon 810 yayo
Iimpawu zokuqala zeprosesa yeMediaTek MT6795 yenza ukuba kucace ukuba umenzi waseAsia uqala ukuba yimbangi enkulu kakhulu yeQualcomm
I-TouchWiz ye-Samsung Galaxy S6 iya kuba sisiseko sokukhanya
I-TouchWiz ye-Samsung Galaxy S6 kunye ne-Galaxy S6 Edge iya kuba kukukhanya okutyibilikayo okukhawulezayo kokubona ii -apps eziza kufakwa kwangaphambili
[Ividiyo] Uhlalutyo lweWoxter Zielo 400 iQuad Core yeWoxter eya kuthi ifumane uhlaziyo kwiLollipop
Apha sikushiya uhlalutyo olupheleleyo lweWoxter Zielo 400, indawo ekumgangatho ophakathi ye-Android kunye nokuhlaziywa kwi-Android 5.0 Lollipop. Yonke into engaphantsi kwe-140 euro ibeke ekhayeni lakho.
[Ividiyo] Sivavanye i-Atongm W008, i-smartwatch engaphantsi kwe-70 Euro
Namhlanje sikuzisa uhlalutyo lwevidiyo yale smartwatch ye-Atongm W008, iwotshi ekwazi ukusebenza ngokuzimeleyo okanye ngokunxibelelana ne-Smartphone yethu kwaye enakho kuzo zombini iimeko zokwenza kunye nokwamkela iminxeba yelizwi.
[Ividiyo] Isiqalisi seSlideUp seLollipop, Isiqalisi esahlukileyo se-Android
Namhlanje sihambisa kwaye sicebisa iSlideUp Lollipop Launcher, isiqalisi esahlukileyo esahlukileyo se-Android esine-Windows 8 ye-Tiles-style dock concept.
I-BQ iveza ii-smartphones zayo ezintathu: I-Aquaris M5.5, M5 kunye neM4.5
I-BQ namhlanje ityhile iifowuni ezintathu ezintsha: i-Aquaris M5.5, i-Aquaris M5 kunye ne-Aquaris M4.5 eyandisa usapho lakwa-Aquaris
Amarhe okuqala eMeizu MX5 athetha ngekhamera enee-megapixels ezingama-41
Amarhe okuqala malunga neMeizu MX5 sele efika, isiphelo sendlela esinokuba nescreen se-5.5-intshi 2L kunye neelensi ezingama-41-megapixel
Iza kuba yintoni ibhokisi yemfihlakalo ye-Motorola?
Ukuqikelelwa kwam okuhle kumxholo webhokisi yemfihlakalo ye Motorola
[Ividiyo] I-Banana Kong, tsiba, tsiba, tyhala kwaye ungaphoswa nayiphina ibhanana esendleleni
I-Banana Kong ngumdlalo weqonga wesitayile esimnandi se-Android apho siza kubeka khona izihlangu zaseKong, igorila enobubele izama ukubalekela ibhanana.
Ukusuka kwi-T-Mobile kuza owona mfanekiso ubalaseleyo we-Samsung Galaxy S6
Owona mfanekiso mhle ukuza kuthi ga ngoku kwi-Samsung Galaxy S6 entsha ivela kumqhubi weT-Mobile
I-LG ibonisa iifowuni zayo ezintsha ezi-4 ze-Android eziphakathi
I-LG iza phezulu kule veki ngokuboniswa kwee-smartphones ze-4 ezintsha kuluhlu oluphakathi: i-LG Joy, LG Leon, LG Spirit kunye ne-LG Magna
I-LG G Bukela R, oku kukubonakala kwethu
Senza uhlalutyo lwe-LG G Watch R, iswatchwatch yomenzi waseKorea enesangqa esidayayo kunye nokugqitywa komgangatho ophezulu.
Le iya kuba yi-HTC One M9, imifanekiso, iimpawu zobugcisa kunye nexabiso elihluziweyo
Zonke iinkcukacha ze-HTC One M9 zisandula ukuvuza: imifanekiso yemithombo yeendaba, iimpawu zobugcisa kunye nexabiso.
Olona hlobo kuphela lokuvula iminxeba yelizwi kuWhatsApp
Olona hlobo kuphela kwendlela yokuvula iminxeba yelizwi kuWhatsApp kukwamkela umnxeba ovela kumsebenzisi osele enendawo yokusebenza enikwe amandla.
UGoogle uzakwazisa iYouTube Kids yabantwana endlwini ngoFebruwari 23
I-YouTube yaBantwana iya kufumaneka nge-23 kaFebruwari kuphela kwizixhobo ze-Android zokuzonwabisa kosapho kunye nenjongo ebekwe kwezincinci
I-NVIDIA Tegra X1 ibonakala kwi-AnTuTu
Iibhentshi zokuqala zeNVIDIA Tegra X1 sele zivuziwe, iprosesa enamandla athe umenzi wayivelisa kwiCES 2015
Ikamva likaSony? Consoles kunye nabenzi boluvo lweekhamera
Ikamva lesahlulo sikaSony esijongeka siba mnyama yonke imihla. Ndlela-ntle kuluhlu oludumileyo lweXperia?
Intsha entsha ye-5.2 intshi ye-Sony Xperia ye-smartphone ibonwe kwiibhentshi ezahlukeneyo nge-Android 5.0
USony uza kudlula kwi-MWC 2015 ngaphandle kokuboniswa kwayo nayiphi na i-terminal, eshiya i-Xperia Z4 yayo entsha ehlotyeni. Namhlanje sinolwazi malunga nenye i-Xperia
[Ividiyo] Isilumko ngeposi, umxhasi wemeyile omangalisayo owenza yonke into icace kuwe
Namhlanje sikubonisa enye yezona zicelo zibalaseleyo zokulawula zonke iiakhawunti zethu ze-imeyile. Igama lakho MailWise kwaye simahla.
[Ividiyo] Ibhola ebomvu 4, umdlalo weqonga omnandi we-Android
Namhlanje ndifuna ukukubonisa umdlalo weqonga omnandi we-Android obizwa ngokuba yiBhola ebomvu 4. Umdlalo ofanelekileyo kuyo yonke usapho eya kusenza sichithe ixesha lokuzonwabisa kakhulu.
UToshiba ubonisa iimodyuli zakhe zeProjekthi Ara
Siyazi ukuba kuhlelo olulandelayo lweNkomfa yeHlabathi yeBhola ekwiBarcelona siza kubona ezinye iindaba, sinokude sivavanye iprototype, kodwa ngelixa silindileyo singazonwabela ezi modyuli zeProjekthi Ara epapashwe nguToshiba.
Sivavanye i-Energy Headphones BT9, ii-headphone ezintsha nezinamandla ezivela kwi-Energy Sistem
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo sikwazise ngokusungulwa kwe-Energy Headphones BT9. Namhlanje sithetha ngabo kwakhona kuba sizamile.
Apha sikushiya uluhlu olusemthethweni lweetheminali zeLenovo eziza kuhlaziywa kwi-Android Lollipop.
Isamsung iqala ngemveliso emininzi ye-Exynos 7420 SoC yayo
Isamsung isandula ukubhengeza ukuba sele isenza imveliso ngobuninzi bayo iprosesa ye-Exynos 7420
Kubonakala ngathi iprosesa yeQualcomm Snapdragon 810 iyasokola kubushushu
Ilungu le-Androidpolice portal ibango lokuba usebenzisa i-terminal nge-SoC Snapdragon 810 kwaye unengxaki yokufumana ubushushu
Ukucoca zonke iinkcukacha ze-intshi ye-2 ye-ASUS Zenfone 5
Lonke ulwazi malunga ne-ASUS Zenfone 2 enesikrini se-intshi ezi-5 sikhutshiwe, nesiza kuboniswa ngoMatshi 9
Iprosesa yeQualcomm Snapdragon 810 iphola ngcono kuneSpapdragon 801
Uthelekiso lwenziwe phakathi kweQualcomm Snapdragon 810 SoC kunye ne-Snapdragon 801.
I-LG Bukela i-Urbane, iwotshi yesinyithi ene-Android Wear
I-LG Bukela i-Urbane isetyhula enxitywayo ngenkangeleko yeklasikhi ene-Android Wear njengenkqubo yayo yokusebenza kwaye iya kuziswa kwi-MWC 2015
UGoogle kunye noMatel babonisa uguqulelo lwe-View-Master ngobunyani bokwenyani
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikubonise ipowusta emangazayo malunga nengcaciso ezakwenziwa nguGoogle noMattel eNew York, ngaphakathi kweHlabathi yeToyitoyi ebisenzeka kwi-Big Apple.
I-Snapdragon 810 vs Exynos 7420: I-Qualcomm iphumelela idabi leebenchmark, nangona incinci kakhulu
Thelekisa phakathi kweprosesa ye-Snapdragon 810 kunye ne-Samsung Exynos 7420 ebonisa umahluko phakathi kwezi processor zombini
I-Samsung Galaxy Grand 3 iya kubhengezwa ngokusesikweni kungekudala
IGreen Grand 3 entsha inethemba lokulandela ukuthengisa okumnandi okwakugqityiwe yi-Samsung Grand 2014 ekuqaleni kuka-2
IHuawei iza kuzisa ithebhulethi yeMediaPad X2 kwi-MWC
I-Mobile World Congress kukuqeshwa okungenakuphepheka kwiinkampani ezininzi, ezinje ngeHuawei, eza kuthi thaca ithebhulethi entsha yeMediaPad X2
I-Sony Xperia E4, ivelise uluhlu oluphakathi oluphakathi lomenzi waseJapan
Kwiiveki ezidlulileyo besibona ezinye iinkcukacha zeSony Xperia E4, uluhlu oluphakathi oluphakathi lomenzi waseJapan. AbakwaSony bekulindeleke ukuba batyhile isixhobo sabo esitsha kwi-MWC kodwa ekugqibeleni bafike ngaphambili.
Sivavanye ngokucokisekileyo i-Doogee DG700 Titans 2, i-terminal ene-IP67 yesiqinisekiso esingaphantsi kwe-120 Euro
Namhlanje sivavanye ngokucokisekileyo i-Doogee DG700 Titans 2, ifowuni yomhlaba wonke ene-IP67 yokugqitywa kwesinyithi kunye nofele kwaye ibonakalisile kubathandi bezemidlalo abagqithisileyo okanye umsebenzi ojongwa nzima.
Unikezelo olungakumbi lwe-Samsung Galaxy S6
Unikezelo olongezelelekileyo lokuya kuba kuyilo lwe-Samsung Galaxy S6 entsha eza kuba phambi kwethu kwiiveki nje ezi-2
Isamsung sele isebenza kumlandeli kwi-Samsung Galaxy K Zoom
Ilungelo elilodwa lomenzi wechiza libonisa uyilo lwendlalifa ye-Samsung Galaxy K Zoom, uyilo olunesitayile ngakumbi
I-YouTube iqala ukuphonononga iintengiso ezizibonisayo
Ecaleni kwentengiso nganye siza kubona i icon entsha ukuyivala. Ngokucofa kuyo intengiso iya kunyamalala kwaye endaweni yoko siza kubona uphando oluncinci.
IFlipboard ekugqibeleni inenguqulo yayo yewebhu
Ukuba usebenzisa le nkonzo yonke imihla kwifowuni okanye ithebhulethi yakho, ukusukela namhlanje ungayenza ukusuka kuhlobo lwewebhu
ICanonical kunye neMeizu ziya kuzisa iFowuni entsha nenamandla ye-Ubuntu kwi-MWC 2015
Kwi-MWC 2015 elandelayo sinokubona ifowuni entsha ye-Ubuntu eyenziwe yi-Meizu eneempawu zobuchwephesha ezilandelwe kwi-Meizu MX4.
Amatyala amatsha abonisa uyilo lwe-Samsung Galaxy S6
Imifanekiso emitsha evuzayo yamatyala aselubala e-Samsung Galaxy S6 abonisa umva wesixhobo ngokweenkcukacha
[Ividiyo] Doogee DG280 uphononongo luka-Leo, phakathi kuluhlu lwe-Android olungaphantsi kwe-80 euro
Sivavanye ngokucokisekileyo i-Doogee DG280 LEO, indawo ekumgangatho ophakathi we-Android ngexabiso eliphantsi le-Android kuba sinokuyifumana ngaphantsi kwama-euro angama-80 ekhaya.
I-Sony Xperia Z4 idlulile ezandleni zeGebenbench nge-Snapdragon 810
I-Sony Xperia Z4 ihambe kwiwebhusayithi yeGeekbench apho kufanele ukuba idweliswe njengemodeli entsha, ene-Snapdragon 810
I-Galaxy S6 ihamba nge-AnTuTu ebonisa zonke iinkcukacha zayo
Sikwanazo zonke iinkcukacha ezibonisiweyo kwisixhobo somgangatho we-AnTuTu
Ithebhulethi entsha yeNVIDIA kunye neprosesa yeTegra X1 ayizukufika kude kube lihlobo
Isizukulwana esitsha samacwecwe eethebhulethi zeNVIDIA Shield kunye neprosesa yeTegra X1 ngokuqinisekileyo iya kuboniswa ngoJulayi
Kwikota yesibini ka-2015, ii-smartphones zokuqala ezine-4 GB ye-DDR4 RAM ziya kufika
Namhlanje i-LG G Flex 2 inelungelo lokuba yi-smartphone yokuqala ukusebenzisa iimodyuli ze-RAM ze-DDR4 ngaphakathi, kodwa ububodwa abuyi kuhlala ixesha elide.
Ngaba kulula ukuba abasebenzisi bangene ngemvume kuWhatsApp ngeFacebook?
Amarhe avelile malunga nokuba kunokwenzeka ukuba sizichonge kuWhatsApp ngoFacebook. Namhlanje sihlalutya oko kuya kuthetha ntoni kubasebenzisi.
Uluhlu olutsha lwephakathi kweSony luvela kwi-GFX Bench Sony Xperia E4 emehlweni?
Iibenchmarks zeSony Xperia E4 zisanda kuhluzwa, ilungu elitsha kuluhlu lweXperia eza kuthi thaca kwiMWC 2015
I-NVIDIA sele isebenza kwithebhulethi yeShield ngeprosesa yeTegra X1
Sele siyazi ithebhulethi yeNVIDIA Shield, isixhobo esijolise kwiprofayili yomdlalo ocacileyo kwaye ithandwa kakhulu. Ewe, i-NVIDIA sele icinga ngecwecwe elitsha kwaye, njengoko bekulindelwe, le NVIDIA Shield intsha iza kusebenzisa iprosesa yeTegra X1.
I-Polaroid ingcakaza yonke into kwileta yee-smartphones kwi-MWC 2015
I-Polaroid ifika iqinisekile ngempumelelo yayo kwi-MWC 02015. Ukwenza oku, izinikele ekunikezeleni ngee-smartphones ezingaphantsi kwesine kwiindidi ezahlukeneyo.
Amatyala amatsha abonisa imiphetho emibini egobileyo ye-Samsung Galaxy S Edge
Amanye amatyala avelisiwe abonisa uyilo lwe-Samsung Galaxy S Edge, inguqulelo enescreen esigobileyo se-Galaxy S6
I-Snapdragon 620 iya kuba yiprosesa yokuqala yokusebenzisa ii-ARM Cortex-A72 cores
Ngaphantsi kwegama lekhowudi iMaia, kunye neenombolo zemodeli MSM8976 kunye neMSM8956, la malungu matsha osapho lweQualcomm anokubizwa ngokuba yiSpapdragon 618 kunye neSpapdragon 620 ngokwahlukeneyo.
UMicrosoft ufumana iKhalenda yokuPhuma kwelanga nge $ 100 yezigidi
IMicrosoft iyaqhubeka nokuthenga iinkonzo kunye neeapps kunye nokufunyanwa okutsha kuye kwaba yikhalenda ekhazimlayo ebizwa ngokuba yiKhalenda yeSunrise yezigidi ezili-100 zeedola
"UWetech usenokuninzi ukungqina"
KuGooglelizados siye sakwazi ukuthetha no-Amelia Suárez, umlawuli we-R & D weWetech, ukufunda okungakumbi malunga nezinto zabo ezintsha "ezingabandakanyekiyo"
Isithembiso esitsha se-ARM seCortex-A72 sithembisa ukuguqula ii-smartphones zethu zibe ziziqulatho eziphathekayo
Namhlanje i-ARM ityhile uyilo olutsha, iCortex-A72, ngoku efumanekayo kubathengi bayo abaphambili kwaye iya kufikelela kwintengiso kwi2016.
Ngubani okhathalela iziphene zefektri ye-Nexus 6?
Phakathi kweziphene zefektri ye-Nexus 6 esuka kwi-Motorola kunye ne-Google, kufanelekile ukuba sikhankanye iileta zeNexus kwikhava yayo yangasemva ethi icime.
[Ividiyo] Yintoni iDubsmash?, Inethiwekhi entsha yenethiwekhi ephumeleleyo eYurophu
Apha unoluvo olutsha lwenethiwekhi yoluntu, ebizwa ngokuba yiDubsmash kwaye ejolise ngokukodwa ekwenzeni ukuhlekisa kwevidiyo ehlekisayo.
Ukucaciswa kunye neefoto zeLenovo Vibe Z3 Pro eziza kuboniswa kwi-MWC 2015
I-Lenovo Vibe Z3 Pro iya kuboniswa kwiNkomfa yeHlabathi yeFowuni ka-2015 eza kuthi ichongwe ekuqaleni kwenyanga yoKwindla
Khuphela onke amaphephadonga e-LG G Flex 2
Ngoku unokuzikhuphelela simahla yonke imifanekiso yamaphephadonga, okanye amaphephadonga, kwi-LG G Flex 2
IManta 7x, i-smartphone yaseTshayina ngaphandle kwamaqhosha omzimba
Ngaphantsi kwegama elithi Manta 7x, yayisisisixhobo esisebenza kakuhle kakhulu kwaye sasimile ngaphandle kwebhetri yaso.
I-Huawei P8, iinkcukacha kunye nexabiso livuza
IHuawei P8 inokuba sisixhobo sokuqala ngetekhnoloji ye-16nm enkosi kwi-chip eyintloko ye-Kirin 930 chip
Iifoto ezinokubakho zeOxygenOS ziyavuza ividiyo, i-firmware entsha eza kuza nayo kwi-OnePlus One 2
Apha sikushiya ucinga ukuba yi-OxygenOS boot animation ye-firmware ye-OnePlus One 2
I-HTC A55, umnqweno omtsha onescreen se-5.5-QHD, i-Octa-core CPU, i-3GB ye-RAM kunye nekhamera ye-20MP
I-HTC A55 nangona ingayi kuba yeyona nto iphambili kwinkampani kulo nyaka sisixhobo esinomdla kakhulu se-Android esineenkcukacha ezilungileyo kakhulu
U-Huawei uthi iiMiboniso ezi-4K azikufanelanga ukukhutshwa kwebhetri ephezulu
Iscreen esine-4K resolution sisebenzisa ibhetri ephezulu kwaye le yenye yezinto ezibangela ukuba iHuawei ithathe ixesha lokusebenzisa olu hlobo lwescreen
Isamsung isusa i-TouchWiz bloatware yeGalaxy S6
Isamsung ifuna ukwandisa i-Galaxy S6 yayo entsha ngokuguqula yonke i-Touchwiz bloatware ukuba ikhutshelwe kwaye ngenxa yoko ifikelele kwisiphelo sendlela ye-Nexus.
Isamsung yazisa ngenzuzo esezantsi yonyaka kwiminyaka emi-3 ngenxa yesahlulo sayo esishukumayo
Isamsung yazisa ngedatha yayo yezemali yonyaka kwaye ibonisa ilahleko kwicandelo layo elihambahambayo. Into ekhathazayo
Imfihlakalo malunga neengxaki ze-Snapdragon 810
Iprosesa ye-Snapdragon 810 inike okuninzi ukuba ithethe ngokugxeka i-Samsung kunye nokudumisa kwe-LG. Ifuna ntoni iSamsung?
Sivavanye ngokucokisekileyo inguqulelo entsha yeMiui V6 ene-Android 4.4.4 Kit Kat
Apha sikushiya uhlalutyo lwevidiyo olupheleleyo lwee-Xiaomi ROM ezisemthethweni kule MIUI V6 intsha ine-Android 4.43.4 Kit Kat
I-Waze kunye neeapps ezinje ngeSocialDrive kwindawo ebonakalayo yamaPolisa
Ukusuka eUnited States amapolisa abize iWaze njengesixhobo esifanelekileyo "sababulali bamapolisa" ngelixa belapha bafuna ukuvala iSocialDrive
Uhlalutyo olunzulu lweXiaomi RedMi Qaphela i-4G, mhlawumbi lolona luhlu luphakathi lwe-Android ngexabiso eliphantsi
Nalu uhlalutyo olunzulu lweXiaomi RedMi Qaphela 4G, mhlawumbi olona luhlu luphakathi lomzuzu.
IMotorola icacisa izizathu zokuba kutheni ingadibanisi inzwa yeminwe
Umphathi wangaphambili we-Motorola ucacisa ukuba kutheni i-Nexus 6 ekugqibeleni ingenayo inzwa yeminwe
Tshintshiselana nge-Apple iPhone yoqobo ngeXiaomi Mi Qaphela
Nditshintsha iApple iPhone yenqaku leXiaomi Mi, inqanaba alinamsebenzi. Le yindlela enamandla kunye necacileyo entsha ehlaselayo kaXiaomi ekukhangeleni abathengi beapile yokulunywa.
I-ASUS ilungiselela iZenfone 2 ngescreen esine-intshi ezintlanu
Ngoku amarhe amatsha acebisa ukuba i-ASUS izakulungiselela inguqulelo yeZenfone 2 kodwa ngescreen esincinci, kule meko yeesentimitha ezi-5.
I-LG G3 evela kwi-Movistar ifumana uhlaziyo olulindelekileyo kwi-Android Lollipop
Sele sikulungele ukuqinisekisa ukuba i-LG G3 esuka eMovistar sele ifumana uhlaziyo olusemthethweni kwi-Android Lollipop
I-WhatSim: Ikhadi lokuqala le-SIM elikhethekileyo le-WhatsApp lizelwe
Ukuba le veki ibixakekile ngokweendaba ezinxulumene neebhloko zeWhatsApp, ngoku iSIM yokuqala izelwe ukusebenzisa idatha ngalo myalezo.
I-HTC Desire 626, iya kuthi thaca kwi-MWC 2015?
Imifanekiso yokuqala yeHTC Desire 626, ilungu elitsha losapho loMnqweno lomenzi waseTaiwan, sele ivuliwe
Ukuphahlazeka kukaGoogle Ngoku kuthintela ukurekhodwa kwevidiyo kwikhamera yakho ye-Android
Ndifumene impazamo enkulu kuGoogle Ngoku ethintela ukurekhodwa kweevidiyo kwizicelo zekhamera yee-Androids zethu, kwanezicelo zekhamera yoqobo.
Umfanekiso we-OPPO's Fumana i-9 ivuza, ifowuni eya kuthi ifike nge-Snadpragon 810 chip kunye ne-4GB ye-RAM
Ukucoca umfanekiso we-OPPO Fumana i-9 ebonisa ukuba ilandela umgca wokuyila ofanayo obonwe kwi-OPPO yangaphambili Fumana i-7
Isaziso sobuqhetseba esisebenzisa ibhaso kuGoogle njengesithiyelo
Nangona kunjalo, akukho Google ihambisa amabhaso okanye iqhuba naluphi na uhlobo lovavanyo. Lo myalezo umalunga nobuqhophololo
UWhatsApp + unyanzelekile ukuba avale ngenxa yoxinzelelo oluvela kuWhatsApp
UWhatsApp wathumela ileta kuWhatsApp + umphuhlisi emcebisa ukuba ayeke ukukhula kweapp kunye nokususa amakhonkco okhuphelo
I-Samsung S6 entsha ayizukusebenzisa i-chip ye-Snapdragon Qualcomm 810
Isamsung ayizukusebenzisa i-chip yeQualcomm Snapdragon ngenxa yobushushu obukhulu, obunokubangelwa yinto esetyenzisiweyo kwisiphelo sayo esitsha.
Umgaqo wobuxoki we-20% wexesha labasebenzi bakaGoogle
Iintsomi kwihlabathi lobuchwephesha obutsha zininzi, kwaye uGoogle wayengazukuba yedwa. Namhlanje sithetha ngomgaqo-nkqubo odumileyo we-20% wexesha ongazange ube njalo.
Imifanekiso evela kuhlobo lwewebhu lweWhatsApp ivuza
Umxhasi wewebhu kaWhatsApp yenye yezona zinto kulindeleke ukuba zikwazi ukusebenzisa le nkonzo kwikhompyuter yedesktop
Ngaba uyafuna ukujoyina inkqubo ye-beta ye-Instagram kwaye ube nguMvavanyi weBeta? Kwi Androidsis sicacisa ukuba ungayifumana njani
Ukuqukumbela ndichaza onke amanyathelo ekufuneka elandelwe ukuba abe ngomnye wabavavanyi be-beta ye-Instagram ye-Android.
Iakhawunti yam kaWhatsApp ivaliwe, ngoba?
Ukuba iakhawunti yakho kaWhatsApp ivaliwe apha siyakuxelela izizathu zokuba kutheni esi sigqibo singqwabalala senkampani kaMarck Zuckerberg
IHuawei P8 yenyanga ka-Epreli enescreen se-5.2-intshi kunye ne-3GB ye-RAM
Iscreen se-5,2-intshi ye-1080p yeHuawei P8 iya kukuvumela ukuba ube nobomi obulungileyo bebhetri obulandelayo ekuvukeni kweXperia Z3
Uchitha malini amandla amaninzi ukushiya i-smartphone yakho itshaja ubusuku bonke?
Izixhobo zandisa ukusetyenziswa kwamandla, nangona kunjalo, ukushiya i-smartphone ishaja ubusuku bonke akubonakali kwibhili yakho yombane yonyaka.
Ziphi uhlaziyo kwiLollipop yeMoto G 2014?
Ubunyani bohlaziyo kwi-Android Lollipop kuluhlu lweMoto G 2014, ubuncinci eSpain, yitshimera kuba okwangoku akukho zindaba zedosi ethenjisiweyo ye-Android lollipop.
I-Samsung Galaxy S6 iya kuba neglasi ngasemva
I-Galaxy S6 iya kuba yifowuni entsha ye-Samsung elindelwe ngumoya omtsha kuyilo nakwizixhobo
I-smartwatch yokuqala ye-HTC iya kuhamba ne-M9 Flagship entsha kwi-MWC 2015
Le smartwatch evela kwi-HTC iya kuhamba neflegi entsha ye-M9, eya kuthi ilandele uyilo olufanayo olubonwe kwiminyaka edlulileyo ngaphandle kokumangaliswa.
Inzwa yeminwe ye-Samsung Galaxy S6 ayizukufuna ukuswayipha
Bekulindeleke ukuba umntu oza kungena ezihlangwini ze-Samsung Galaxy S5 adibanise umfundi wolu hlobo. Ingxaki kwilungu lakutshanje losapho lweGlass S kukuba kuye kwanyanzeleka utyibilikise umnwe ukuze usebenzise isivamvo. Ewe kubonakala ngathi iSamsung iyayisombulula le ngxaki ngenzwa yeminwe ye-Samsung Galaxy S6.
Sivavanye i-Energy eReader Pro, incwadi ye-Energy Sistem ene-Android
Namhlanje siza kukuxelela ngenye yeencwadi zamva nje eziye zangena kwimarike. Imalunga ne-Energy eReader Pro, incwadi ye-elektroniki esungulwe yi-Energy Sistem.
SONICable, intambo ehlawulisa i-smartphone yakho kabini ngokukhawuleza
SONICable, iprojekthi yokufumana imali ukuba iza kufika kwiziqhamo iya kwenza ubomi bethu bube lula kancinci njengoko ihlawulisa kabini ngokukhawuleza
Imodeli enigmatic ivela kwiwebhusayithi yeSamsung, ngaba iya kuba yi-Samsung Galaxy S6 Edge?
Isixhobo esine-enigmatic esineenombolo zemodeli SM-G925A ivele kwiwebhusayithi yeSamsung, ngaba yiSamsung Samsung S6 Edge?
Ukonakala 2, imodeli yokuqala yemodyuli yentengiso evela kwiProjekthi Ara
NgoLwesithathu odlulileyo iqela elingemva kweProjekthi Ara, okanye iProjekthi Ara, libambe inkomfa kwikomkhulu likaGoogle eMountain View. Ngokutsho kwesigebenga sonxibelelwano sivelise i-Spiral 2, i-smartphone yokuqala yemodyuli eya kuthi ithengiswe.
Sivavanye i-NGS Odysea 500QHD, i-Quad Core ye-129 euro VAT ifakiwe
Namhlanje sivelisa i-NGS Odysea 500QHD, i-Android 4.4.2 Kit Kat ye-smartphone ene-quad-core MKT 6582M processor kunye ne-1 Gb ye-RAM yee-Euro ezili-129 kuphela kubandakanya neVAT.
I-Xiaomi Mi Qaphela iPro ene-5,7-intshi ye-Quad HD screen, i-Snapdragon 810 chip kunye ne-4GB ye-RAM
Ngokungafaniyo neMi Qaphela, iMi Qaphela Pro inayo i-chip ye-Snapdragon 810, i-CPU enkulu yeyona fowuni inamandla kwintengiso okwangoku
UXiaomi ubhengeza iNqaku leMi ngescreen se-intshi ye-5,7, i-3GB ye-RAM kunye ne-Snapdragon 801 chip
UXiaomi ekugqibeleni ubhengeze namhlanje iXiaomi Mi Qaphela nge-4,7-intshi yesikrini, i-3GB ye-RAM kunye ne-Snapdragon 801 chip
bq inyusa ixabiso loluhlu lwayo lwee-smartphones kunye neetafile
Ngokufika kukaJanuwari, iifestile zeevenkile ezininzi bezizele yimifanekiso ebhengeza ukuthengisa. Nangona kubonakala ngathi ayinguye wonke umntu ocinga ngokufanayo. Okanye ubuncinci bq. Kwaye umenzi-sigqibo uthathe isigqibo sokunyusa ixabiso lezinye iimveliso zalo.
Dlala iVS Ivenkile yeVenkile yeVenkile: Google Play sele izuza ngenani lezicelo kwiVenkile yeApple yeApple
Kwidubhu eyoyikekayo phakathi kweVenkile yokudlala VS Ivenkile yeApple, i-Android iphumelele umdlalo kwinani lezicelo kunye nabaphuhlisi beapp ababhaliswe kwiVenkile yokudlala.
I-Android Jelly Bean kunye neKitKat yenziwa maxesha ngoYilo lweZinto
Uzakuyenza njani lento? Kulula kakhulu, ngokusebenzisa isiQalisi seGoogle ngoku, apho uza kungenisa khona iindaba zakutshanje ze-Android Lollipop.
U-Oppo wazisa nge-Mirror 3, isiphelo esisezantsi-sefowuni engama-64
U-Oppo ubhengeza enye ifowuni engama-64 kodwa isiphelo esisezantsi, ngokuchanekileyo i-Oppo Mirror 3
I-iPow 10000E yeyona ilula kakhulu ye-10.000 mAh Walio PowerBank kwintengiso
I-iPow 10000E evela kwiWalio Electronics yi-10000 mAh Power Bank eqinisekisa ukuba singabiza i-smartphone okanye ithebhulethi yethu naphina.
Uhlaziyo kuToliko lukaGoogle lufika kunye nokuguqulelwa kwemifanekiso kunye neencoko ngexesha lokwenyani [Khuphela i-APK]
Le nguqulo intsha izisa ukuguqulelwa ngaxeshanye kwemifanekiso kunye neencoko ezibukhoma. Iimpawu ezimbini ezinika iToliki kaGoogle ubulunga ngakumbi
I-Samsung Galaxy J1, inqanaba elitsha lokungena kwi-smartphone eliya kubiza imali engaphantsi kwe-100 euro
Idatha ikhutshiwe kwi-Samsung Galaxy J1 entsha, isixhobo esiza kubandakanya uluhlu lokungena ngexabiso elinomtsalane: iya kubiza i-100 euro
I-LG G3 iya kufumana uhlaziyo olutsha olusekwe kwi-Android 5.0.1 enomdla kakhulu
I-LG G 3 iya kufumana uhlaziyo olutsha olusekwe kwi-Android 5.0 Lollipop yokudibanisa ezinye izinto ezisebenzayo ze-LG G Flex 2.
I-OpenMobile iyakwazi ukuqhuba isicelo se-WhatsApp se-Android kwiTizen nge-ACL
I-ACL iyakwazi ukuqengqa isicelo sokuqala se-WhatsApp se-Android kwiTizen, ngaloo ndlela ivula ukungqinelana kwezicelo ze-Android zamanye amaqonga eselfowuni.
I-Motorola entsha ihamba ngeFCC Moto E 2015?
IMotorola idlulile kwiCCC i-smartphone entsha enegama lekhowudi IHDT56QF1 Ngaba siyayibona iMoto E 2015 entsha?.
IXiaomi Mi5, imifanekiso emitsha kunye nenqaku le-AnTuTu
Ifowuni entsha kaXiaomi, ekucingelwa ukuba yi-Mi5, iya kuziswa ngeentsuku ezimbini. Sinamanqaku e-AnTuTu kunye nemifanekiso emitsha
[RUMOR] I-Samsung Galaxy Qaphela i-5 iya kuba ne-bezel egobileyo kabini
Amarhe amatsha eza kuthi anokukhomba kwimodeli ye-Samsung Galaxy Note 5 enescreen se-bezel egobile.
Ividiyo ibonisa i-Android 5.0.1 Lollipop kunye neSense 6.0 kwi-HTC One M8
I-HTC One M8 iya kufumana i-Android 5.0 Lollipop kamva kule nyanga kunye nokongezwa kwesakhelo sayo esidumileyo seSense 6.
YI-SURPRISE !!, Ixabiso le-LG G Flex 2 lihluziwe
Iifilitha zeAmazon kwiphepha layo laseJamani ixabiso le-LG G Flex 2 ngexabiso lokuthengisa nge-599 Euro engummangaliso.
I-Android 5.0 Lollipop iza kungekudala ku-2013 nakwizixhobo ze-Motorola ze-2014
IMotorola izakuhlaziya zonke izixhobo zayo ezikhutshwe ngo-2013 nango-2014 ziye kwi-Android 5.0 Lollipop. Uhlaziyo olulindelweyo.
Iqinisekisiwe !!, uSony uza kuqala ukukhupha uhlaziyo lweLollipop lothotho lweXperia Z ngoFebruwari olandelayo
Iqinisekiswe ngokusesikweni nguSony ukuba uhlaziyo oluthenjisiweyo kwi-Android Lollipop kuthotho lwe-Xperia Z luza kuqala ukuthunyelwa ngoFebruwari olandelayo.
Le iya kuba yi-HTC One (M7) ene-Android 5.0 kunye ne-Sense 6
Ividiyo ikhutshiwe ibonakalisa i-HTC One M7 eqengqelekayo nge-Android 5.0 L kunye ne-Sense 6, umaleko wesiko le-HTC.
Umfundi we-iris ufikelela kwiifowuni eziphathwayo njengesiqinisekiso sokhuseleko
Itekhnoloji entsha esekwe kukhuseleko nakwimidlalo bhanyabhanya yamabali eentsomi ithatha ii-smartphones ezinje nge-iris reader kwiVissonson V5.
Izixhobo zeSelfie zazikho ngo-1995 (kwaye zazithathwa njengezingenamsebenzi)
I-selfie tripod yahlelwa kwincwadi engama-95 njengenye yezinto ezingenamsebenzi. Ngo-2015 kuboniswa njengesixhobo esinekamva. Yintoni etshintshileyo?
Imiba yokutshisa ubushushu iyaqhubeka kwiiprosesa zeQualcomm Snapdragon 810
I-Qualcomm inengxaki enkulu kwiprosesa yayo yeflegi. i-Snapdragon 810, njengoko ishushu kakhulu.
Imifanekiso ye-3D yeXiaomi Mi4s ihluziwe
Sele sinemifanekiso yokuqala yeXiaomi Mi4s, i-smartphone entsha yomenzi waseAsia enokuthi iboniswe ngoJanuwari 15.
Iiyunithi ezingama-20000 zeNokia N1 zithengiswe kwimizuzu nje emi-4
Ithebhulethi yeNokia N1 ithengiswe eTshayina ngeeyunithi ezingama-20000 4 ezithengiswe kwimizuzu emi-3 kuphela. Ithebhulethi eza kukhuphisana ngokuchasene ne-iPad Mini XNUMX
Ngakumbi ukuvuza kweXiaomi Mi 5, ubukhulu be-5.1mm kweyona fowuni inqabileyo emhlabeni
Kwi-5.1 millimeters ubukhulu, iXiaomi Mi5 yeyona fowuni icekeceke emhlabeni. Umbuzo uhlala ukuba uya kufika nge-chip ye-Snapdragon 810
IPolaroid iveza iipilisi zayo ezimbini i-L7 kunye ne-L10 nge-Android Lollipop
I-Polaroid ifika e-CES eLas Vegas iveza iipilisi ezimbini ezisezantsi, i-L7 kunye ne-L10 ezibonakaliswa ngokuba ne-Android 5.0 Lollipop kunye ne-quad-core chips
[SWEEPSTAKES] I-HTC Desire 816 ene-Androidsis kunye ne-HTC Spain
I-Androidsis ngokusebenzisana ne-HTC Spain iyavuya ukwazisa nge-HTC Desire 816 raffle oya kuthi ngayo ufumane le fowuni ye-Android isimahla.
IKraftwerk, itshaja ephathekayo yegesi
IKraftwerk yitshaja ephathekayo enikwe amandla yigesi, ngaphandle kwesidingo sokuyifaka kumbane wombane nangaliphi na ixesha
I-Android inkqubo yokusebenza yeselfowuni ngokugqwesa eSpain
Idatha yamva nje esemthethweni kwakhona isithsaba se-Android njengenkqubo yokusebenza kwefowuni elawula ngumahluko omkhulu eSpain.
Inkokeli ye-WhatsApp kwicandelo layo nangona isalahleko ngusozigidi
Nangona iyinkokeli engenakuphikiswa kwicandelo lezicelo zokuthumela imiyalezo, i-WhatsApp ibonisa izigidi zelahleko ngo-2014.
UAsus ubhengeza i-Fonepad 7 ngescreen se-7-intshi, ii-SIM ezimbini kunye neefowuni zezwi
UAsus wazisa kunyaka ophelileyo e-CES eLas Vegas iFonepad 7, ukuze kulo nyaka izise uhlaziyo olutsha ngezinto ezihlaziyiweyo
Isamsung ibonisa ngokusemthethweni iGalaxy A7
I-Galaxy A7 sele iyinyani kwaye kwiiveki ezimbalwa ezizayo iya kuziswa ngokusemthethweni yiSamsung. Ukuza kuthi ga ngoku ibonakalisiwe eMalaysia
ILenovo ityhila isiphelo esisezantsi se-TAB 2 A7-10 kunye neepilisi ze-A7-30
I-Lenovo ibeka iipilisi ezimbini ezintsha ngescreen se-intshi ezi-7 kwaye eza ngexabiso elimalunga ne-99 yeedola. Eyona nto imbi kukuba abanayo ikhamera
Oppo U3, ifowuni ene-5,9-intshi yesikrini kunye nekhamera ye-13MP ene-4x zoom zoom
I-Oppo U3 ine-zoom ebonakalayo njengenye yeempawu zayo ezahlukileyo xa kuthelekiswa nezinye izixhobo zolu khuphiswano
I-smartphone yokuqala ye-Kodak iza nekhamera ye-13MP
I-smartphone ye-Kodak IM5 yifowuni ye-5-intshi enekhamera ye-13MP kwaye kulindeleke ukuba ibe nomgangatho ophezulu ekufotweni
I-Zenfone Zoom, i-smartphone entsha ene-optical zoom kwi-ASUS
I-ASUS ivelise iZenfone Zoom, i-smartphone yokuqala yenkampani edibanisa ukusondeza okubonakalayo kwe-3x. Ixabiso layo? $ 399
I-ASUS Zenfone 2, i-smartphone yokuqala ene-4 GB ye-RAM
I-ASUS ivelise iZenfone 2, i-smartphone ene-5.5-intshi yesikrini kunye ne-4 GB ye-RAM. Ngaba iyakubiza imali engaphantsi kwama-euro angama-300 njengezinye iZenfones?
IXiaomi Redmi 2 iboniswe ngeSpapdragon 410 64-bit chip ye- $ 119
Ifowuni ene-64-bit ye-Qualcomm Snapdragon 410 chip kunye nescreen se-4,7-intshi esikwenza ukuba wenze into yakho kwimidlalo ye-Android ye- $ 119
UParrot ubhengeza inkqubo yeRNB6 yemoto yakho nge-Android Lollipop kunye nenkxaso ye-Android Auto
IParrot RNB6 yinkqubo yemoto yakho ephethe i-Android 5.0 Lollipop kunye ne-Android Auto. Imveliso enomdla kakhulu kwisithuthi sakho
Ngaba i-Samsung Galaxy S6 iboniswe kwintengiso ye-Samsung Knox?
Ngaba i-Samsung Galaxy S6 iboniswe kwintengiso ye-Samsung Knox? Ukujonga umfanekiso wesixhobo, inokuba yeyona nto iphambili yaseKorea
Ngaba i-ASUS iya kubonisa imodeli yoluhlu lwayo lweZenfone kunye nokusondeza okubonakalayo?
I-ASUS ipapashe i-enigmatic teaser enokuthi icebise ukuba uluhlu lwayo olutsha lwe-ASUS Zenfone luya kuba nemodeli yokusondeza ebonakalayo
I-smartphone yePalm inokufika ngo-2015
Iselfowuni i-Onetouch ithenge iPalm kwaye iya kuqala ukuphuhlisa izixhobo ezitsha phantsi kolu hlobo lweWebOS. Iindaba ezinomdla
Ezona smartphones zibalaseleyo ngokweReddit
Nangona kukho amakhulukhulu ee-smartphones kwimarike yangoku, kuba siqala unyaka omtsha akukho nto sikudlulisa eyona imbi ngokwendlela yabasebenzisi beReddit.
I-LG G4 inokuba nosiba
Amarhe amatsha athetha ngokuba kunokwenzeka ukuba i-LG G4 isebenzise i-G Pen, istylus esenziwe ngumenzi ilungelo lobunikazi kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo
I-Xiaomi Arch, i-smartphone enescreen esigobile ukukhuphisana neNqaku leNqaku
Umfanekiso we-Mi smartphone entsha ukhutshiwe, iXiaomi Arch, eya kuthi ivelele kwiphaneli yayo egobileyo
UGoogle ulungisa enye yezona bugs ziyindinisa kwi-Android 5.0 Lollipop
I-Android 5.0 ibilolona hlaziyo lukhulu ukuza kuthi ga ngoku kwaye oko akuthethi ukuba iyithintele ekufikeni kweebugs ezinzulu
Udliwanondlebe nabenzi beGuudjob
Isicelo seGuudjob sisandula ukunikwa ibhaso ngeyona app ilungileyo yaseSpain ekuqeshweni ukuba uMhla woSetyenziso sele uququzelele iminyaka emihlanu. Ukusuka kuGooglelizados sikuzisa udliwanondlebe kunye nabenzi beli sicelo sitsha.
Iimephu zikaGoogle zifumanisa irhamncwa laselwandle
Ukubonakaliswa kwesidalwa saselwandle esingaqhelekanga imvelaphi yayo ingaziwa sele ifunyenwe kwitheku lase-Oke Bay eNew Zealand.
Thatha inxaxheba kwi-beta kunye nokukhuphela i-Solid Explorer 2.0 yeAlfa simahla ngoYilo lweZinto kunye nokunye okuninzi
Ngoku ungathatha inxaxheba kwinkqubo yokuvavanywa kweBeta eSolid ye-2.0 yokuvavanya izinto ezintsha ngokwendlela yoyilo lwale fayile
I-Samsung Galaxy Tab 4 Lite, ithebhulethi entsha esezantsi ye-Samsung eya kubiza imali engaphantsi kwe-100 euro
Ukuvuza okutsha kuthetha ukuba i-Samsung Galaxy Tab 4 Lite iya kubiza i-99 yeedola, ngaphantsi kwe-100 ye-euro ukuyitshintsha
Ngaba i-OnePlus ezimbini iya kuba ne-SIM ezimbini kunye nekhadi le-SD elincinci?
Ividiyo yokwazisa ye-OnePlus ibonisa inkxaso yamakhadi e-SD amancinci ukongeza kwi-SIM ezimbini. I-OnePlus ezimbini emehlweni?
Isamsung ilungiselela ushicilelo olukhethekileyo kakhulu lweSamsung Galaxy Note Edge
Uthotho lwemifanekiso luye lwatyhilwa lubonisa ushicilelo olukhethekileyo lweSamsung Galaxy Note Edge ehlanjwe ngegolide
Eminye imifanekiso yeHuawei inyuka ngeP8 ezakuqaliswa ngo-Matshi 2015
IHuawei inyuka ngeP8 iza kuziswa ngenyanga yoKwindla kunyaka ozayo kwaye iboniswe njengenye yeetheminali ezibaluleke kakhulu zika-2015
UGoogle Play utshintsha imigaqo-nkqubo yakhe kwakhona, ethintela uphononongo kwiinkcazo
Imigaqo emitsha kaGoogle Play itshintsha imigaqo-nkqubo ethintela uphononongo kwinkcazo, emele ukungancedi kwabaphuhlisi.
I-LG G3 iqhuma ngomatrasi ngokupheleleyo
Kuyamangalisa kodwa kuyinyani. I-LG G3 iqhuma ngelixa ibiza ubhedu ihamba ngoomatrasi
I-ASUS ityhila uPegasus X002 ngescreen esine-intshi ezi-5, i-64-bit ye-quad-core chip kunye ne-2GB ye-RAM ye- $ 129
I-ASUS ibhengeza i-Pegasus X002, ifowuni ene-quad-core chip, i-2 GB ye-RAM kunye nescreen se-5-intshi ngexabiso leedola ezili-129
I-Samsung Galaxy Note 2 iya kufumana uhlaziyo olusemthethweni kwi-Android Lollipop
I-Samsung Galaxy inqaku 2 iya kuba nohlaziyo lweLollipop oluqinisekiswe ngokusemthethweni yiSamsung.
I-NES30, kude kwisixhobo sakho se-Android esixubusha i-nostalgia esemgangathweni kunye nokuchaneka
I-NES30 isilawuli esilingisa indawo yokudlala eyonwabileyo yeNES, ikhonsoli yokuqala yeNintendo, ngokugqitywa kokugqitywa komgangatho kunye nomgangatho.
IHuawei ityhila i-Ascend GX1, "phablet" ene-6-screen kunye ne-quad-core Snapdragon 410 chip
I-Huawei's Ascend GX1 ihlawula ngokukodwa ukwenza eyona ndawo iphambili kwifowuni
Ukunyuselwa kweKrisimesi kaVodafone: kude kube nguJanuwari 7, 40 GB nge-2 euro
IVodafone ibonelela ngonyuselo olunomdla kakhulu kule Krisimesi: i-40 GB ye-intanethi nge-euro ezi-2 kuphela
Iividiyo ezintsha zibonisa i-Samsung Galaxy Note 4 kunye ne-Edge Edge eqhuba i-Android 5.0.1
Iividiyo ezimbini ezintsha zibonisa i-Samsung Galaxy Note 4 kunye ne-Note Edge eqhuba i-Android 5.0.1 Lollipop, inguqulelo yamva nje yenkqubo yokusebenza kaGoogle
INokia C1: Ifowuni yokuqala yeNokia emva kokufunyanwa kweMicrosoft?
INokia C1 yifowuni ye-Android eza kuza kukhapha ithebhulethi yeNokia N1 eyabonwa kwinyanga ephelileyo. Ummangaliso kunye nokubhengezwa kweenjongo
Ividiyo ye-HTC One M8 ene-Android Lollipop
Sele sinamavidiyo okuqala apho sibona i-HTC One M8 isebenza nge-Android Lollipop.
Imifanekiso yeHTC One M8 icocwe ngeSense 6.0 kunye nencasa yayo ye-Android 5.0 Lollipop
I-Sense 6.0 iya kuzisa abasebenzisi be-HTC One M8 ubuhle kunye nezibonelelo ze-Android 5.0 Lollipop ngokwemigaqo yoyilo kunye nokusebenza
IChatON iya kuvala iingcango zayo ngoFebruwari 1 nangona izakuqhubeka eMelika
IChatON, inkonzo yemiyalezo ekwi-intanethi ekwi-Samsung, iya kuthi shwaka kwilizwe liphela ngoFebruwari 1, nangona izakuhlala eMelika
I-OCU igxeka abenzi abaphambili ngokusikhohlisa ngememori yangaphakathi yezixhobo zethu
I-OCU igxeke abenzi abaphambili bee-smartphones kunye neetafile ngokusikhohlisa ngememori yangaphakathi yezixhobo zabo
Ilizwi likaWhatsApp libiza esona sipho silungileyo kulo nyaka uzayo
Kwi-WhatsApp beta entsha siboniswa iinkcukacha ezintsha malunga neefowuni ze-WhatsApp ezilindelekileyo.
Iimpawu zeSamsung Galaxy E7 ziqinisekisiwe
Ngokuqinisekileyo i-Samsung kuya kufuneka inciphise uluhlu lwezixhobo zayo kunyaka olandelayo, ikhuthazwa ziziphumo ezibi ...
Ngoku ungathenga iMeizu MX4 Pro
Ngoku ungathenga iMeizu MX4 Pro ngevenkile yamaTshayina oyithumela kuwe kwisithuba seveki enye kwii-euro ezingama-441.
Iimpawu ezimangalisayo ze-Android; Namhlanje, iToucher edadayo
I-Toucher yokudada sisicelo esidadayo se-Android esivumela ukuba senze isenzo ngokukhawuleza ngonqakrazo olunye.
AbakwaSony balungiselela ukumilisela i-Xperia Z4 Tablet Ultra ngescreen esingu-12,9-intshi
Isixhobo esitsha esinobukhulu obukhulu ngo-Sony nge-Xperia Z4 yeCwecwe le-Ultra elinesikrini esizi-intshi ezi-12,9
U-Sony ufumana i-bandwagon yokubuyisa imali kunye nesindululo esinomdla kakhulu
USony usungula iphulo lokubuyisa imali ukuze liphuhlise iQrio Smart Lock, isitshixo esihle.
IHuawei isazisa nge-Honor 6 Plus, i-smartphone ene-5,5-intshi yesikrini, i-octa-core chip kunye ne-3G ye-RAM
IHuawei isandula ukubhengeza iHuawei Honor 6 Plus, iyonke ifowuni eyi-5,5-intshi kwiscreen, i-3GB ye-RAM kunye ne-octa-core chip
Uvavanyo lwesantya se-Androidsis; Namhlanje, i-LG G2 VS HTC Umnqweno 816
Namhlanje sijamelene ne-HTC Desire 816 emangalisayo xa kuthelekiswa nemodeli yelizwe jikelele ye-LG G2. Ngubani oza kuphumelela umlo kule LG G2 VS HTC Desire 816?
U-Sony uqalise isifundo sevidiyo ukuvula i-Xperia bootloader
Ukusuka kwividiyo ungafunda ukuba uyivula njani i-bootloader yefowuni ye-Xperia ukuba ulandela onke amanyathelo avela kwisifundo
Uyilo lwempahla luza kwiCyanogenMod 12 ngenkqubo yemiyalezo emitsha kunye nesidlali somculo
ICyanogenMod 12 iya kukhutshwa kamva kulo nyaka kwaye izise uyilo lweZinto, kunye nokuyilwa ngokutsha kwemiyalezo kunye neapps zomculo
I-YouTube ibonelela ngezivumelwano ezisisigxina kwiinkwenkwezi zayo
Kubonakala ngathi kuGoogle abemi ngxi phambi kwabakhuphisana neYouTube kwaye bazakube benikezela ngezivumelwano ezingcono kwiinkwenkwezi zabo ukuze zibabophe.
I-Android 5.0 Lollipop iza kwi-Samsung Galaxy S4 Google Play Edition
I-Samsung Galaxy S4 Google Play Edition, inguqulelo emsulwa ye-Android ye-S4, sele ifumana i-Android 5.0 Lollipop nge-OTA.
IMotorola inokulungiselela i-DROID Phablet efanayo ne-Nexus 6 kodwa ngeempawu ezingcono
IMotorola inokulungiselela isixhobo esitsha seDROID uyilo olufana neNexus 6 kodwa eneempawu ezingcono
Zonke ezi ziindaba eziza kuziswa yiprosesa yeQualcomm Snapdragon 810
Zeziphi izinto ezintsha eziza kuziswa yiprosesa yeQualcomm's Snapdragon 810? Kule nqaku sichaza zonke iimfihlelo zayo
Nazi iiPhephadonga ezimbalwa ze-smartphone yakho ene-Quad HD screen
Ngaba unayo i-Quad HD ye-smartphone okanye i-phabet kwaye awufumani wallpapers? Namhlanje sikuzisa ezimbalwa ozakuzithanda
Amarhe amatsha aqinisekisa ukubekwa kwe-Sony Xperia Z4 Compact kunye ne-Sony Xperia Z4 Ultra
Uxwebhu luye lwavuza oluqinisekisa ubungqina bezobuchwephesha kwi-Sony Xperia Z4 Compact kunye ne-Z4 Ultra, eya kuboniswa kwi-CES 2015
Ungayiseta njani imo yeendwendwe kwiChromecast
Imowudi entsha ye-Chromecast yeendwendwe yinto efanelekileyo yokufumana okuninzi kwesi sixhobo nosapho
IBlue Charm, uluhlu olutsha lwezixhobo zeMeizu ziya kuboniswa ngoDisemba 23
IMeizu iya kuzisa umgca wayo omtsha wezixhobo zeBlue Charm ngoDisemba 23, eya kuthi ishiye ii-smartphones ziye kwiirutha.
Ukucoca umhla wokuhlaziya kwi-Android 5.0 Lollipop yezona zixhobo zininzi ze-Samsung
Umhla wohlaziyo kwi-Android 5.0 iye yavuza izixhobo ezininzi ze-Samsung eziya kuhlaziywa kuhlobo lwamva nje lwe-OS kaGoogle
I-AEDE iyarhoxa kwaye icele uRhulumente ukuba aphephe ukuvalwa kweGoogle News eSpain
Ngale ntsasa sifunde isiqwenga seendaba abaninzi ngelishwa balinda ixesha elide: Iindaba zeGoogle eSpain ziya kunyamalala ngokulandelayo ...
Ezona fowuni zibalaseleyo ze-Android oza kudlala nazo, ngokutsho kwabadali beeMark 3D
Abenzi be-3D Marks application bapapashe umzobo ngee-smartphones ezingcono kakhulu zokudlala, apho i-Nexus 6 kunye ne-Samsung Galaxy S5 bemi.
Ukudlala kukaGoogle kutyhila ezonaapps zikhutshelweyo, imidlalo yevidiyo kunye nomxholo wokuzonwabisa we-2014
I-Google Play ibonisa kuthi kwi-infographic owona mxholo wokuzonwabisa ukhutshelweyo kuGoogle Play ka-2014
Khwela, umnini ophezulu ekumgangatho ophezulu weedivayisi eziphathwayo ukuya kuthi ga kwi-6
Namhlanje ndikuzisela uphononongo lwenkxaso, yenkxaso yendalo iphela yezixhobo zeselfowuni ukuya kuthi ga kwiscreen se-6, esibizwa ngokuba yiNtaba nesinika elona xabiso liphezulu lemali kwintengiso.
IVivo X5Max yeyona fowuni icekeceke emhlabeni kwi-4,75mm
IVivo X5Max isandula ukubhengezwa e-China kwaye izakufika ukuphela kwale nyanga kwimimandla eyahlukeneyo ngexabiso elimalunga ne-485 yeedola
Ii -apps zokutya zokutya zeminwe; Namhlanje, i-pastry
Ngokuqinisekileyo ngeKrisimesi, ngaphezu komnye wabafundi bethu uya kwenza umlomo wakhe amanzi, kwaye ...
Ukuphonononga i-HTC Desire 816, isiphelo esimnandi se-Android kwii-Euro ezingama-300
Kule nqaku intsha sibona uphononongo lwe-HTC Desire 816, isiphelo esimnandi se-Android esiya kukothusa ngexabiso lemali.
Sihlalutya i-MiP, irobhothi ye-android ongayilawula ngesixhobo sakho se-Android
I-MIP yirobhothi ye-android eme ngendlela yayo yokulinganisa kunye nokukwazi ukulawulwa yinkqubo evela kwisixhobo esiphathwayo
Sivavanye i-Motorola Nexus 6
Kolu hlaziyo lutsha sivavanya kakuhle i-Motorola Nexus 6 entsha nelindelwe ixesha elide kwaye sikunike umbono wethu wokuqala.
I-LG yazisa nge-G Watch R2 nge-LTE kwi-MWC 2015
AbakwaLGG bangabonisa i-LG G Watch R2 ukuthatha ithuba lokufika kwe-MWC 2015 kwisixeko saseBarcelona
UTonino Lamborghini 88 Tauri, i-smartphone yobunewunewu yenkampani yase-Italiya
Eyona fowuni ilungileyo yabasebenzisi beLambo yiTonino Lamborghini 88 Tauri, igugu ngokwendlela yoyilo kunye nexabiso elinokufikelela kwabambalwa kakhulu.
Igrafu ibonisa iindleko zokuvelisa zoluhlu lweGPS S kunye ne-iPhone
Ezi tshathi zibonisa eyona ndleko yokuvelisa i-Samsung's Galaxy S yoluhlu lwazo zonke ii-iPhones
Imifanekiso emitsha ye-Mi5 isibonisa amacala ayo
Imifanekiso emitsha evuzayo yeXiaomi Mi5 bonisa amacala ayo kunye nezakhelo zangaphambili
Uvavanyo lwe-Nexus 6, Ngaba i-Google Nexus 6 iyamelana namanzi?
Ngale vidiyo sinokufumana umbono wokuchasana neGoogle Nexus 6 emanzini, ngaba iya kunyamezela uvavanyo?
I-Pinć, iiglasi eziyinyani ezisongekayo eziya kubiza iidola ezingama-99
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukusuka kumhla we-iPhone babethetha ngePinć, iiglasi eziyinyani, ezithi zisebenzise iscreen se-iPhone, ziya kubonelela ngamathuba afanayo neGoogle Crdboard, i-Zeiss VR One gadas okanye i-Samsung Gear VR ye umenzi waseKorea.
Isamsung ilungisa utshintsho ukusombulula iingxaki zayo zezemali
Iziphumo ezibi zemali ebezipapashwa yiSamsung kwezi nyanga zidlulileyo zibangele ukuba inkampani yenze iinguqu ezimbalwa.
U-Sony uvula i-Sony Aquatech, ivenkile yokuqala engaphantsi kwamanzi
I-Sony Aquatech, ivenkile yokuqala engaphantsi kwamanzi, ivula iingcango zayo ukubhengeza iimveliso zomenzi waseJapan ezingena manzi
Ucingo, esona sicelo sokuthumela imiyalezo kwangoko kwiVenkile yokudlala
Ucingo ngumqondo omtsha kwizicelo zemiyalezo ekhawulezileyo yemultiplatform, ezifumanekayo ze-iOS, i-oSX kunye ne-Android zisinika imiyalezo kunye neefowuni zezwi zasimahla ezivela kunxibelelwano lwesixeko.
Iimpawu ezinokubakho zomphumeleleyo we-Moto E zihluziwe
Ngaba kuya kubakho isizukulwana sesibini se-Motorola esinexabiso eliphantsi? Ngokwabafana abavela kwiTechmaniacs, ewe kwaye babenobuganga bokuthetha malunga neempawu zobuchwephesha zomlandeli kwiMoto Moto E
I-Lenovo K3 «Music Lemon» ifowuni ukukhuphisana ngokuchasene neXiaomi Redmi engaphantsi kwe- $ 100
Injongo yeLenovo K3 Music Lemon icacile: ubuso ngobuso ngokuchasene neXiaomi Redmi nefowuni engagqithiyo kwiidola ezili-100
I-Pinc ijika i-Android yakho ibe yiglasi yokwenyani yesitayile seNgxelo encinci
I-Pinc ngumqondo omtsha weiglasi eziyinyani kwisitayile esicocekileyo seNgxelo yoNcinci.
I-AnTuTu iqinisekisa iinkcukacha ze-Samsung Galaxy S6: 5.5, Quad HD screen kunye neLollipop
I-Samsung Galaxy S6 iza kufika ine-5.5-intshi Quad HD screen kunye ne-Android Lollipop. Iflegi entsha isendleleni evela kwi-AnTuTu
I-Qualcomm ityhila isantya seprosesa yayo ye-Snapdragon 810
Umvelisi weprosesa utyhile isantya sewotshi esibonelelwa yiQualcomm Snapdragon 810 SoC
Sivavanye i-SPC GLOW 9.7 Retina, ithebhulethi enomtsalane
Uguquko lwamacwecwe yinto enje ukuba ibingezizo ezomsebenzi wenkonzo ...
I-Android 5.0 iqala ukufika ngokusesikweni kwi-Samsung Galaxy S5 eYurophu
Isamsung sele isungula i-Android 5.0 kwi-Samsung Galaxy S5, iqala ngePoland ukufikelela kwamanye amazwe aseYurophu
Iimpawu ezimangalisayo ze-Android; Namhlanje, iiMaphu.Me Pro simahla kwiVenkile yokudlala
Ngoku unokukhuphela iMaphu.Me Pro simahla, usetyenziso lweemephu ezingaxhunyiwe kwi-intanethi ngoku ezibandakanya inkonzo yendlela kunye nokukhomba kwinqanaba lokukhomba.
[APK] Iindaba zeGoogle kunye nohlobo lwemozulu 2.2
Iindaba zikaGoogle kunye neMozulu zihlaziywa kwiinguqulelo ze-2.2 kunye nokuphuculwa okunje ngomxholo omnyama, ukukhangela kwangaphakathi, uphawu olutsha kunye nokuhamba kwicala phakathi kweendidi.
UGoogle utshintsha i-CAPTCHA yemveli ye-reCAPTCHA
UGoogle utshintsha i-CAPTCHA yemveli yale nguqulo intsha ye-reCAPTCHA, efuna ukunceda ngayo abasebenzisi.
I-Puzzlephone, ifowuni ekhuphisanayo ukukhuphisana neProjekthi Ara
U-2015 uya kuba ngunyaka apho le fowuni yeemodyuli intsha evela kwisiqalo saseThai eya kuthi ibonise iPuzzlephone ibone ukukhanya
Eyona midlalo ilungileyo ye-Android; Namhlanje, iMortadelo kunye neFayilemon umdlalo wevidiyo
Namhlanje sisungula icandelo levidiyo kwi-Androidsis yeyona midlalo ilungileyo ye-Android kunye neMortadelo kunye neFayilemon umdlalo wevidiyo.
ISanta Tracker 2014, iimigigames zikaGoogle zekrisimesi
ISanta Tracker ka-2014 yiwebhusayithi onokulandela kuyo umkhondo weSanta Claus kwihlabathi liphela ngoDisemba 24
I-AirLyrics; Umguquleli wengoma ngaxeshanye kwi-Android
Namhlanje ndikubonisa lo mguquleli wengoma ngaxeshanye we-Android. Isicelo esibizwa ngokuba yiAirLyrics kwaye sinokufumana simahla kwiVenkile yeGoogle Play
Ukuphonononga Thatha i-G5 HD, i-smartphone yokuqala yeGigatel
Namhlanje sikuzisa uphononongo lwe-smartphone yokuqala evela kwinkampani yaseSpain iGigatel, iCapture G5 HD.
Isamsung iya kusothusa nge-Samsung Galaxy S6 entsha
Amarhe amva nje ngeSamsung ye-Samsung S6 ityhila iindaba ezimnandi kakhulu, ezinje ngoyilo oluhlaziyiweyo okanye ukuphuculwa kongqameko lweTouchWiz
ISony Mobile ilungiselela ukubonelela okunomdla kakhulu ngoLwesihlanu oMnyama
Ngethuba lokuqala uSony Mobile eSpain ujoyina uLwesihlanu oMnyama ngo-2014 ngothotho lwezinto ezinomdla kakhulu kwivenkile ekwi-Intanethi.
Iingxaki zeLollipop ze-Android ziyaqhubeka: i-RAM kunye ne-SMS bugs
Kubonakala ngathi iingxaki kwi-Android Lollipop ziyaqhubeka njengoko ngoku kukho iimpazamo ze-RAM kunye ne-SMS bugs.
Uvavanyo lokulahla »lweNexus 6, nantso indlela eziphatha ngayo kwimeko yokuwa
Njengokwesiko, ngoku lithuba lokubuya kweNexus 6 ukuya kudumo "lovavanyo lokudropha", masibone ukuba lumelana njani nokuwa.
I-International Draw Moto G 2014 enkosi kwi-Androidsis kunye ne-Actualidad Motor
Ngomzobo wamazwe ngamazwe we-Moto G 2014 yi-Androidsis kunye ne-Actualidad Motor uya kuba nakho ukuphumelela enye ebusweni bakho.
Iimpawu ezimangalisayo ze-Android; Namhlanje isiqalisi seCobo
I-Cobo Launcher sisiqalisi sasimahla se-Android esivelela isantya sayo kunye nokwenza ngokwezifiso ngemixholo enokukhutshelwa kwisicelo sayo.
Imfuno yokuKhawulezisa akukhoMida kwindlela yayo kunye nesantya esipheleleyo kwi-Android
Isidingo sokuKhawulezisa akukho Mida yinto emitsha evela kubuGcisa be-Elektroniki njengemoto yevidiyo yokubaleka ongenakuphoswa yi-Android yakho
ICorning iveza iiglasi zeGorilla 4, iipaneli zomvelisi ezintsha ezinganyangekiyo
Umvelisi uCorning usandula ukwazisa uluhlu lwayo olutsha lweepaneli zeGorilla Glass 4, ethembisa kabini ukuxhathisa kwabo bangaphambili
IMotorola Keylink ukufumana ngokukhawuleza ifowuni yakho elahlekileyo
IMotorola Keylink sisixhobo esiya kuthi sincede ekufumaneni zombini ifowuni elahlekileyo kunye nezitshixo zetyala njengoko zinokuqhutywa kwisitshixo
Ekupheleni konyaka we-2015 i-Samsung iya kuphehlelela i-smart foldable ngokupheleleyo
Ekupheleni kuka-2015 i-Samsung izakwazisa i-smartphone ngesikrini esongwayo ngokupheleleyo. Sithetha nge-smartphone okanye ithebhulethi enokusongwa ngesiqingatha.
Yile nto i-Android 5.0 Lollipop ijongeka ngayo kwi-Samsung Galaxy Note 3
Namhlanje sikuzisa ividiyo ebonisa ukuba i-Android 5.0 Lollipop isebenza njani kwi-Samsung Galaxy Note 3, i-phablet eyaziwayo yomenzi waseKorea.
Umququzeleli we-Twitter uphehlelela iSuper, inethiwekhi ekhanyayo kunye nenemibala yenethiwekhi yokwabelana ngezimvo.
Isoftware yinkqubo entsha okanye uthungelwano lwasentlalweni apho ungazisa khona zonke iintlobo zezimvo ngemifanekiso, amabinzana aphambeneyo kunye noopopayi abahlekisayo. Amava awodwa
Enye ibug kwi-Android 5.0 Lollipop, ngeli xesha inxulumene nekhamera
Enye ibug kwi-Android 5.0 Lollipop, ngeli xesha ibug kwithotshi enyanzela usetyenziso lwekhamera ukuba luvale.
IiNkonzo zikaGoogle zokudlala zihlaziywa ngeAPIs ezintsha kunye nokuphuculwa kweeapp zikaGoogle [APK]
Ezi Mephu zintsha, iWallet, iDrive kunye neeFit APIs ziya kuvumela abaphuhlisi bomntu wesithathu ukuba bafumane okuninzi kwiiapps zabo
Ophumeleleyo kwiBq Aquaris E6
Okokugqibela, i-Bq Aquaris E6 ibeyintshatsheli yomzobo kaCarlos Merino García de Ciudad.
I-Samsung S5 kunye ne-iPhone 5S, yeyiphi eyona smartphone ibalaseleyo?
Senza amagqabantshintshi ngokufana kunye numahluko okhoyo phakathi kweemodeli zombini, eziqwalaselwa ngabaninzi njengenye yeefowuni ezilungileyo kwezentengiso.
USony ubonakalisa inzwa ye-230MP IMX21 eza kufika kwiXperia elandelayo
I-Xperia X4 entsha inokudibanisa inzwa entsha ye-IMX230 eza nokufunyanwa kwesigaba kugxilwe
Iimpawu ezimangalisayo ze-Android; Namhlanje UnlockYourBrain, isitshixo sokufunda ngokuvula i-Android yakho
UnlockYourBrain sisicelo sokutshintsha indawo yokutshixa i-Android kunye nenye esivumela ukuba sifunde izinto ezintsha yonke imihla.
I-Launcher eyi-2 sisiQinisekisi esisebenzayo nesilungeleleneyo esijolise kwimveliso
I-Smart Launcher 2 sesinye sezona ziqalisi ezingcono esinokuzikhuphelela zona kwi-Android yethu ukuba into esiyikhangelayo yeyona minimalism, ukusebenza kunye nemveliso ngaphezu kwayo yonke enye into.
Prynt, umshicileli ojika i-smartphone yakho ibe yikhamera yePolaroid
I-Prynt yinto yokufikelela kwi-smartphone yakho eya kuguqula ifowuni yakho ibe yikhamera yePolaroid, ekuvumela ukuba uprinte iifoto kubhabho.
Ukuphonononga ukubukela kwe-LG G
Apha ndikushiya olu Hlaziyo lwe-LG G Watch apho ndikubonisa khona ukubonakala kwam kokuqala malunga noku kuyinxiba kwe-Android Wear.
I-Android Lollipop inengxaki ekufumaneni iinethiwekhi ze-WiFi
Abasebenzisi be-Nexus 5 kunye ne-Nexus 9, kwaye banengxaki yokufumana iinethiwekhi ze-WiFi okoko basebenzise i-Android Lollipop.
Ngoku unokufihla itshekhi eluhlaza okwesibhakabhaka kabini nge-beta ye-WhatsApp [Khuphela i-APK]
Sele sinayo inguqulelo ye-beta ka-WhatsApp ekhoyo esivumela ukuba sifihle itshekhi eluhlaza okwesibhakabhaka eguqule umhlaba wonke
Yintoni uphawu lweenkwenkwezi kwibar yomgangatho kwi-Android 5.0 Lollipop?
I-Android 5.0 Lollipop izisa uphawu lweenkwenkwezi oluhambelana nokungaphazamisi imo kunye noseto lwesaziso
Isiqalisi seScreen seScreen, iLauncher ehambelana nosuku lwakho ukuya kuthi ga ngoku
Namhlanje ndifuna ukucebisa ngesiqalisi seScreen Screen, isiQalisi esinomdla nesinengqiqo se-Android esiguqula iimfuno zakho zemihla ngemihla.
UGoogle ubhengeza isitshixo soMculo kuYouTube ngokudlala ngasemva, ngaphandle kwentengiso, kunye nokunye
I-YouTube Music Key iza neempawu eziphambili: ukudlala ngasemva, iaudiyo engaxhunyiwe kwi-intanethi kunye nokususwa kweentengiso
I-AnTuTu ipapasha ingxelo ngee-smartphones ezili-10 ezilungileyo kakhulu
I-AnTuTu ipapashe itshathi ebonisa ii-terminals ezinikezela ukusebenza kakuhle. Ukuphumelela? Inkqubo yeMeizu MX4.
I-Moto G yi-smartphone yokuqala yokuhlaziya kwi-Android 5.0
I-Moto G 2014 entsha, kuhlobo lwayo lwaseNyakatho Melika, sele ifumana uhlaziyo kwi-Android 5.0 Lollipop nge-OTA. Enye inqaku eliphawulwe nge-Motorola
I-Medley yamahemuhemu malunga ne-Sony Xperia Z4, i-Xperia Z4 Ultra, i-Xperia Z4 Compact kunye ne-Xperia Z4 yeCwecwe
Izolo kufike ingxelo kwizixhobo ezitsha ze-Android zenkampani yaseJapan iSony ye2015
Sivavanye i-NGS Odysea 470HD
Namhlanje sikunika umbono wethu onyanisekileyo malunga ne-NGS Odysea 470HD, i-terminal ekwixabiso lamaxabiso e-Motorola Moto G 2014.
I-Moto G 2014 iya kuhlaziywa kwi-Android Lollipop ngaphambi kokuphela kwalo nyaka
Ngeendaba ezinje, ayindothusi into yokuba i-Motorola izuze ukuthembela kubathengi bayo, kwaye iMoto G 2014 iyakufumana idosi yayo yeLollipop ngaphambi kokuphela kwalo nyaka 2014.
Ngawaphi amazwe aya kuthi angene kwi-Samsung Galaxy Note Edge?
Abafana abavela eSammobile bapapashe amazwe apho i-Samsung Galaxy Note Edge iza kufika khona, kubandakanya iSpain.
Sivavanye iWalio IBTA 211, isithethi seBluetooth esimangalisayo salo naluphi na uhlobo lwesixhobo
Namhlanje sikuzisa ukubuyiswa kwesithethi seBluetooth esimangazayo esivela kwiWalio brand, iWalio IBTA 211 ngamandla agqwesileyo, umgangatho wesandi kunye nokuzimela okungaphantsi kwee-euro ezingama-26.
Izibonelelo ezintle eziza ne-Android 5.0 Lollipop yokufota
Iifoto ezivela kwisixhobo esine-Android 5.0 ziya kuba kumgangatho ophezulu kwaye ziya kuyenza ngaphambili nasemva kwayo. Ishumi kuGoogle
Lawula zonke iinethiwekhi zentlalo kwisicelo esinye
Namhlanje ndicacisa indlela elungileyo yokuba lonke uthungelwano lwasentlalweni lulawulwe kwisicelo esinye kwaye ke siphucule ukusebenza kwesiphelo sethu se-Android.
Yintoni esinokuyilindela kwibhetri ene-Android 5.0 Lollipop?
Sichaza izizathu zobomi bebhetri obude kwisixhobo esine-Android 5.0 Lollipop
Iqela leProjekthi ye-Ara lilungiselela imodyuli enemisebenzi ye-oximeter
Sele siyazi ukuba uGoogle uyathanda ukusikhathalela yiyo loo nto iqela leProjekthi yeAra lilungiselela imodyuli entsha eya kuba nemisebenzi ye-oximeter. Ngale ndlela unokulinganisa inqanaba leoksijini kwigazi lomsebenzisi kunye nokubala inqanaba lokugcwalisa.
IMotorola inokuba neMoto G 2014 4G entsha ezandleni zayo
IMotorola iphinde yaphinda yafumana uphononongo oluvela kumaphepha-ndaba awodwa noluhlu lwayo olutsha lwee-smartphones. Zombini iiMoto G 2014 ezintsha kunye neMoto X 2014 entsha ibe yimpumelelo enkulu kwaye kubonakala ngathi umenzi osekwe e-Illinois ebesele esebenza kwiMoto G 4G entsha.
I-Samsung Galaxy Alpha iyasinda ekuweni kwebali le-7
Isamsung yeGalufa ye-Samsung iye yakumelana nokuwa ukusuka kubude bemigangatho esi-7. Kubonakala ngathi i-Samsung smartphone ilitye.
ISpain lilizwe lesithathu eYurophu elaphula ezona smartphones
Enye irekhodi yokubetha, eyokwaphula iifowuni eziphathwayo ngomzuzu okanye ngeyure okanye ngosuku. Ewe, siya okwesithathu kuluhlu oludumileyo.
Uhlaziyo olutsha lwe-OnePlus One lulungisa ii-bugs ezahlukeneyo
ICyanogenMod ikhuphe uhlaziyo olungisa iimpazamo ezininzi ezazitsalwa yi-OnePlus One, olu hlaziyo luzisa uzinzo kwifowuni.
USamMobile usifundisa i-Android 5 Lollipop kwiGPS S4
Ukusuka eSamMobile basifundisa ukuba inguqulelo entsha ye-Android, i-Android 5 Lollipop, injani kwi-Samsung Galaxy S4.
Amarhe amatsha malunga ne-Samsung Galaxy S6 athetha ngescreen esigobileyo njenge-Edge Edge
Umhlalutyi weshishini ubanga ukuba i-Samsung Galaxy S6 iya kuba nescreen esigobileyo, uyilo olufana kakhulu neNqaku le-Edge, nangona lineepaneli ezimbini.
Ngoku ungayihlaziya i-LG G3 yakho kwi-Android 5.0 Lollipop (imodeli ye-F300S kuphela)
Sele sinayo i-KDZ yokuqala ye-Android 5.0 Lollipop yemodeli ye-LG G3 F300S, ke ukuba uyafuna ungahlaziya i-LG G3 yakho kwi-Android 5.0 Lollipop.